Vaovao - Ny turbinina ge 9ha.02 dia nahomby tamin'ny asany ara-barotra voalohany tamin'ny làlam-pamokarana herinaratra 4A any Malezia
Turbinina gasikara Ge 9ha.02 dia tafita tamim-pahombiazana tamin'ny asa ara-barotra voalohany tamin'ny làlam-pamokarana herinaratra 4A any Malezia
Ny foibem-pamokarana SPG 1,440MW mitambatra haingam-pandeha Track 4A any Malezia dia vita soa aman-tsara tamin'ny asa aman-draharaha ara-barotra. Ity no orinasa mpamokatra herinaratra mitambatra 9HA.02 voalohany manerantany hiasa.
GE dia manome famokarana herinaratra miaraka amina haavo haavo miaraka amin'ny foibe fitahirizam-pahefana sy serivisy famokarana herinaratra manodidina ny androm-piainan'ny herin'ny herin'izy ireo, anisan'izany ny fitaovana famokarana herinaratra, vahaolana nomerika ary fifanarahana amin'ny serivisy.
Miaraka amin'ny haitao turbin-tsolika GE HA-classe indostrialy, ny fahafahan'ny herinaratra famokarana herinaratra Track 4A dia afaka manome ny filan'ny herinaratra manodidina ny 3 tapitrisa tokantrano Maleziana.
Malaysia, Johor-24 Febroary 2021, General Electric (izay antsoina hoe "GE"), CTCI Zhongding ary Southern Power Sdn Bhd (izay antsoina hoe "SPG") dia niara-nanambara fa any Pasir Gudang, Johor, Malaysia no misy azy io. Ny tobin-jiro SPG Track 4A dia napetraka tamim-pahombiazana tamin'ny asa ara-barotra androany. Io famokarana herinaratra mitambatra entona mitambatra 1,440MW io dia mpamokatra herinaratra mitambatra lasantsy GE 9HA.02 voalohany manerantany hahatratrarana asa ara-barotra. Turbin-tsolika iray, mpamokatra herinaratra iray ary vilan-tsolika hafanana iray. Ankoatr'izay dia nanao sonia fifanarahana serivisy maharitra maharitra 21 taona miaraka amin'ny GE ny toby famokarana herinaratra. GE dia hanome azy serivisy sy vahaolana nomerika hanampiana ny toby famokarana herinaratra hanatsara ny fahitana ny fananany, ny maha-azo itokisana azy ary ny fisian'izany. Ny famokarana herinaratra ao amin'ny toby famokarana herinaratra Track 4A dia antenaina fa hihaona amin'ny filan'ny tokantrano Maleziana 3 tapitrisa eo ho eo.
GE dia hanome ny foibe famokarana herinaratra miaraka amina vahaolana nomerika feno, serivisy fanatsarana ny toby famokarana herinaratra, ary koa serivisy fanaraha-maso momba ny milina sy teknika ho an'ny turbine 9HA.02. GE Digital's Predix * rindrambaiko fitantanana fahaiza-mitantana APM dia hanara-maso ny fahombiazan'ny foibe famokarana herinaratra, manampy ny toby famokarana herinaratra hanatsara ny fahitana ny fananana, ny fahamendrehana ary ny fisian'izany, ary hampihena ny vidin'ny asa sy ny fikojakojana. Ho fanampin'izany, ny fitaovana famokarana herinaratra dia miaraka amina sensor, ary ny Ivotoerana Fanaraha-maso sy Diagnosis (M&D) GE ao Kuala Lumpur dia hanara-maso sy handinika ny angon-drakitra nangonin'ireo sélecteur manodidina ny ora.
"Ny GE dia laharana voalohany amin'ny fahafaha-manana turbine vita amin'ny entona ao Malezia, ary nanangona traikefa manan-karena maherin'ny 40 taona. Miaraka amin'ny tombony manokana ananany, ny GE dia hanohy hanampy amin'ny fanomezana ny filan'ny herinaratra eo an-toerana izay mitombo ao Malezia. ” Ny filoham-pirenena GE Gas Power Asia ary ny Lehiben'ny Executive Executive Ramesh Singaram dia nilaza. “Tamin'ity indray mitoraka ity, ny turbine GE 9HA.02 dia nahavita tamim-pahombiazana ny asa ara-barotra voalohany eran'izao tontolo izao tany Malezia, nanamarika zava-bita iray hafa lehibe ho an'ny tarika HA-class. Miaraka amin'ny haitao farany, serivisy ary vahaolana nomerika, ny GE dia hanome an'i Malezia fahatokisana bebe kokoa. , Serivisy famokarana herinaratra azo avy amin'ny solika. ”
Momba ny GE Gas Generation
GE Gas Power dia mpitarika amin'ny indostrian'ny herinaratra manerantany, manome vahaolana sy serivisy teknolojia feno lanja hatramin'ny famokarana herinaratra ka hatramin'ny fanjifana, miaraka amin'ireo teknolojia lehibe manerantany: turbine gazy, mpamokatra herinaratra, famokarana aditif, famokarana herinaratra hybrid, vahaolana amin'ny rafitra fanaraha-maso, serivisy sy ny vahaolana manerana ny zavamaniry. Manana ny turbine gazy lehibe indrindra eto an-tany isika, miaraka amin'ny ora fiasana mihoatra ny 600 tapitrisa. Ny famokarana angovo GE dia manohy manavao ary miara-miasa amin'ny mpanjifa mba hampivelatra ny teknolojia angovo ho avy hanatsarana ny tambajotram-pamokarana herinaratra onenan'olona.